Video:-Madaxweyne xigeenka Puntland oo magacaabay gudi la tacaala tacadiyada Kufsiga – Idil News
Video:-Madaxweyne xigeenka Puntland oo magacaabay gudi la tacaala tacadiyada Kufsiga
Posted By: Jibril Qoobey April 24, 2019
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Ahna ku-simaha Madaxweynha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa amray hirgelinta iyo fulinta xeerka kufsiga, iyadoo oo la tixraacayo go’aankii kasoo baxay shirkii Golaha Xukuumadda ee toddobaadkii hore.
Sidoo kale Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo tixraacaya Qodobka 37-aad ee lagu aas-aasay Guddiga gaarka ah ee fullinta iyo Maraynta arrimaha la xiriira danbiyada kufsiga si waafaqsan sharciga ayaa waxaa guddigaas lagu xoojiyey Madaxtooyada, Wasaaraddaha Amniga iyo Arrimaha Gudaha.
Ugu dambeyntii Guddigan uu magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, Ahna ku-simaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa ay u xilsaaaran yihiin qodobbada hoos ku qoron;
Hubinta iyo dabagalka fullinta xukumada kufsiga.
Maareynta iyo u kuurgelidda arrimaha ku saabsan kufsiga.
Baarista haddii ay jiraan waxyaalo dhiiri gelinaya ama cid ka danbeysa soo noqnoqoshada ficilka kufsiga ee dilku la socdo.